Koonfur Afrika oo door ka qaadanaysa gurmadka la siinayo dadka ku waxyeeloobay masiibadii Puntland – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2013 4:35 b 0
Johannesburg,? November 18, 2013 – Dowladda Koonfur Afrika ayaa shaacisay in ay door wayn ka qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay masiibadii ku dhuftay deegaano ka tirsan Puntland, horaantii bishaan aynu ku jirno.
Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jocob Zuma ayaa lagu yiri ?Dadka Koonfur Afrika iyo dowladdooda waxay xanuunka la wadaagayaan dadkii ku waxyeeloobay duufaantaasi, annaga oo u? tacsiyaynayna dadka waayay eheladoodi ay jeclaayeen.?
Koonfur Afrika waxaa ay sheegtay in ay door wayn ka qaadanayso gurmadka loo fidinnayo dadka wax ku noqday masiibada ka dhacday xeebaha Puntland, qoraalka ayaa lagu sheegay in ay jiraan dad kumannaan ah oo aan weli helin cunto iyo biyo ku filan.
Qoraalka laguma shaacin habka ay koonfur Afrika uga qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka masiibadu haleeshay oo si deg deg ah wax ugu baahan, sidoo kale lama oga xilliga ay gurmadka keeni doonaan Puntland.
?waxaan u rajaynayaa soo kabasho deg deg ah dadka masiibadu ku dhacday.? Ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha koonfur Afrika uu ka soo saaray masiibada ka dhacday Puntland.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay gurmad deg deg ah la soo gaaraan bulshada dhibaataysan ee ku sugan deeganada masiibadu ka dhacday, ilaa hadda Puntland waxaa gurmad la soo gaaray Itoobiya iyo Jabuuti.
Annadiif oo Baydhabo u tegay u kuur-gelidda howlaha AMISOM ee Bay iyo Bakool